တစ်ရွာလုံးပိုက်ဆံကိုင်ခွင့် မရသည့် ဒုံးဆွေသန်းကျေးရွာ - Padaethar
တစ်ရွာလုံးပိုက်ဆံကိုင်ခွင့် မရသည့်တံငါရွာ ဒုံးဆွေသန်းကျေးရွာ
လူတစ်ဦး၊ မိသားစုတစ်စုတွင်မက တစ်ရွာလုံး ပိုက်ဆံမရှိဘဲ ရပ်တည်နေထိုင်သည့် ရွာတစ်ရွာမှာ တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရှိနေသည်။တနင်္သာရီတိုင်း မြိတ်ခရိုင် ကျွန်းစုမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေမြစ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ယင်းရွာရှိနေသည်။
ဒုံးကျွန်းအုပ်စုအတွင်း ဒုံးပုလဲအော် ၊ ဒုံးညောင်မှိုင်း ၊ဒုံးဒဟွန်း စသည့်ကျေးရွာအမည်များရှိကြသည်ကို လူအများကသိကြသည်။သို့သော်( ဒုံးဆွေသန်းကျေးရွာ) ဟု ရွာလေဆိပ်တွင်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတင်ထားသော်လည်း သူ့ရွာအမည်ကို လူအများသိပ်မကြားဖူးကြ။
သည်ရွာကို ဦးဆွေသန်းဆိုသူက လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ကျော်ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ခြေတစ်ရာနီးပါးပင်ရှိလာနေပြီဖြစ်သည်။
ယင်းရွာတွင် လက်ရှိနေထိုင်နေကြသူ တခြားဒေသများမှ လာရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး အခြားဒေသများမှလာရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး အခြေချနေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်။သို့သော် ဦးဆွေသန်းမှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
၄င်းအစား သမီးဖြစ်သူက အဖေ၏ လုပ်ငန်းများအား ဆက်လက်ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေသည်။ရွာရှိ ၁၂ နှစ်အရွယ် ယောက်ျားကလေးမှအစ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်သည့် အမျိုးသားအားလုံးမှာ ပင်လယ်ပြင်ထွက်၍ ငါးပုစွန်ဖမ်းကာ နေ့တဓူဝ လုပ်ကိုင်နေကြရသည်။
သို့သော်လည်း ၄င်းတို့ နေပူ မိုးရွာမရှောင် လုပ်ခဲ့ကြသည့် လုပ်အားခ ငွေကြေးတစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မြင်ဖူးခြင်းမရှိကြ။ယင်းအစား လိုအပ်သည့် ရိက္ခာ များကိုသာ သူတို့ရရှိကြသည် ပိုက်ဆံကိုတော့ ဒီရွာမှာ ဘယ်သူမှ မကိုင်ကြရဘူးဟု ယင်းရွာနေ အသက် ( ၄၅ ) နှစ်ခန့်ရှိသူ အမျိုးသားကပြောသည်။
ရွာရှိပုစွန်ငါးဖမ်းပိုက်လှေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဦးဆွေသန်းဆိုသူက ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ရွာသား ( ၉၀ ) ရာခိုင်နှုန်းသည်လည်း ၄င်း ထံတွင် အလုပ်လုပ်နေကြရသည်။
အလုပ်သမားတစ်ဦး၏ တစ်လ လုပ်အားခမှာ က‌လေးဆိုလျှင် ကျပ်သုံးသောင်းဝန်းကျင်နှင့် လူကြီးဆိုရင်ကျပ်တစ်သိန်းဝန်းကျင်ခန့် ရရှိကြသည်၊သို့သော်ရရှိသည့် လုပ်အားခကိုမူငွေကြေးအဖြစ် သူဌေးကမည့်သည့်အခါကမှ ထုတ်ပေးခြင်းမရှိ။
ငွေရှိပါကလည်း ဝယ်ခြမ်းစားသောက်စရာ ဈေးဆိုင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အရက်ဆိုင် ကွမ်းယာဆိုင် ဟူ၍လည်းရွာတွင် မရှိ ။ဆိုင်ဆိုသည်က နတ္ထိ ။ရွာသားများလိုအပ်သည့် ပစ္စည်း များ အားလုံးကိုဦးဆွေသန်း ဆိုင်တစ်ခုတည်းတွင်သာ ရယူကြရသည်။
ဆိုင်ဆိုတာ သူတို့မထိုင်ဖူးကြသူကများတယ်။တခြားရွာရောက်လို့လည်း ဆိုင်ထိုင်ဖို့ သူတို့မှာ ပိုက်ဆံမှမရှိတာဟု ၄၅ နှစ်ရှိ ယင်းရွာသားတစ်ဦးက ပြောသည်။ရွာတွင် အလယ်တန်းအဆင့်ထိစာသင် ကျောင်းရှိသော်လည်း လူငယ်သုံးပုံတစ်ပုံမှာ ကျောင်းမနေကြရ။
စောစောစီးစီးလုပ်ငန်းခွင်ထဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရသည်။ ဦးဆွေသန်းထံတွင် ရွာ၏လူဦးရေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အလုပ်လုပ်နေကြရာတွင်အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ရေလုပ်သား ငါးဆယ်ကျော်ခန့်လည်းဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ဟု ရွာသားကပြောပြကြသည်။
သူဌေးနားမှာ အလုပ်လုပ်နေသူတွေက တစ်ယောက်မှအကြွေးမကင်းကြဘူး ။ အနိမ့် ဆုံးဆယ်သိန်းလောက်တော့အကြွေးတင်နေကြတယ် ဟု ယင်းရွာနေထိုင်သူ အသက် ၃၅ နှစ်ရှိ အမည်မဖော်လို အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
အကြွေးတင်နေသူများကို သူဌေးက ရသည့်လစာထဲမှ လစဉ်နုတ်ယူလျက်ရှိပြီး ယင်းလူများအား ရိက္ခာ ပစ္စည်း ရောင်းချရာတွင်လည်းတစ်နေ့ နှစ်ထောင်ငါးရာ တန်ဖိုးထက် ပိုရောင်းပေးခြင်းမရှိဟု ၄င်းတို့ကဆိုသည်။
ယင်းအပြင်ကျန်းမာရေးမကောင်းသဖြင့် အလုပ်မဆင်းနိုင်လျှင်လည်း ယင်းမိသားစုအား အလားတူ တစ်နေ့ နှစ်ထောင်ထက် ပိုရောင်းပေးလေ့မရှိ ဟုရွာသားများကပြောပြသည်။လူများတဲ့ မိသားစုက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး စားလောက်မလဲ။
ဆန်တစ်ပြည်ပဲ တစ်ထောင်ကျော်ကျနေပြီဟု ရွာနေအမျိုးသမီးတစ်ဦးကပြောသည်။အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ဦးသေလျှင် ကျန်ရစ်မိသားစုက အကြွေးကျေအောင်လုပ်ဆပ်နေရပြီး သူဌေးအကြွေးသံသရာဝဲသြဃအတွင်း သူတို့ဘဝများ ရုန်းထွက်လွတ်မြောက်နိုင်စွမ်းမရှိကြပေ။
အထက်ပါအကြောင်းရာများကို The Tanintharyi Weekly တနင်္သာရီ နိုဝင်ဘာ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ၊ ၂၀၂၀၊ တနင်္လာနေ့ထုတ် ဂျာနယ်မှာ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ထိုနည်းအတူ မြိတ်ခရိုင် ကျွန်းစုမြို့နယ်အတွင်း ကျားပါးစပ် တံငါလုပ်သား များဟာလည်း မိသားစုလိုက် အကြွေးနွံနှစ်၍ ကျားပါးစပ်လုပ်သားတိုင်းလိုလို သားသမီးများကိုပင်ကျောင်မထားနိုင် တစ်ချို့ကျွန်း များမှာလည်းကျောင်းများမရှိကြ၍….
တစ်ချို့သောကျားပါးစပ်ရှိရာ ကျွန်းများဟာလည်း ကျားပါးစပ် သူဌေးစက်လှေကလွဲ၍ မည်သည့်လှေတစ်စီးမှာလာရောက်ခြင်း မရှိကြပါကြောင်း ထပ်လောင်း၍ပြောပြလိုက်ပါရစေ။
အေးမင်းထိုက် / တနင်္သာရီ crd ဘကွန်း
တဈရှာလုံးပိုကျဆံကိုငျခှငျ့ မရသညျ့တံငါရှာ ဒုံးဆှသေနျးကြေးရှာ
လူတဈဦး၊ မိသားစုတဈစုတှငျမက တဈရှာလုံး ပိုကျဆံမရှိဘဲ ရပျတညျနထေိုငျသညျ့ ရှာတဈရှာမှာ တနင်ျသာရီတိုငျးအတှငျးရှိနသေညျ။တနင်ျသာရီတိုငျး မွိတျခရိုငျ ကြှနျးစုမွို့နယျအတှငျးရှိ ရမွေဈကွီးကြေးရှာအုပျစုတှငျ ယငျးရှာရှိနသေညျ။
ဒုံးကြှနျးအုပျစုအတှငျး ဒုံးပုလဲအျော ၊ ဒုံးညောငျမှိုငျး ၊ဒုံးဒဟှနျး စသညျ့ကြေးရှာအမညျမြားရှိကွသညျကို လူအမြားကသိကွသညျ။သို့သျော( ဒုံးဆှသေနျးကြေးရှာ) ဟု ရှာလဆေိပျတှငျဆိုငျးဘုတျကွီးတငျထားသျောလညျး သူ့ရှာအမညျကို လူအမြားသိပျမကွားဖူးကွ။
သညျရှာကို ဦးဆှသေနျးဆိုသူက လှနျခဲ့သညျ့နှဈပေါငျးလေးဆယျကြျောကတညျးက တညျထောငျခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျတှငျ အိမျခွတေဈရာနီးပါးပငျရှိလာနပွေီဖွဈသညျ။
ယငျးရှာတှငျ လကျရှိနထေိုငျနကွေသူ တခွားဒသေမြားမှ လာရောကျလုပျကိုငျပွီး အခွားဒသေမြားမှလာရောကျလုပျကိုငျပွီး အခွခေနြထေိုငျသူမြားဖွဈကွသညျ။သို့သျော ဦးဆှသေနျးမှာ ဆုံးပါးသှားခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ။
၎င်းငျးအစား သမီးဖွဈသူက အဖေ၏ လုပျငနျးမြားအား ဆကျလကျဦးဆောငျ လုပျကိုငျနသေညျ။ရှာရှိ ၁၂ နှဈအရှယျ ယောကျြားကလေးမှအစ လုပျနိုငျကိုငျနိုငျသညျ့ အမြိုးသားအားလုံးမှာ ပငျလယျပွငျထှကျ၍ ငါးပုစှနျဖမျးကာ နတေ့ဓူဝ လုပျကိုငျနကွေရသညျ။
သို့သျောလညျး ၎င်းငျးတို့ နပေူ မိုးရှာမရှောငျ လုပျခဲ့ကွသညျ့ လုပျအားခ ငှကွေေးတဈပွား တဈခပျြမှ မွငျဖူးခွငျးမရှိကွ။ယငျးအစား လိုအပျသညျ့ ရိက်ခာ မြားကိုသာ သူတို့ရရှိကွသညျ ပိုကျဆံကိုတော့ ဒီရှာမှာ ဘယျသူမှ မကိုငျကွရဘူးဟု ယငျးရှာနေ အသကျ ( ၄၅ ) နှဈခနျ့ရှိသူ အမြိုးသားကပွောသညျ။
ရှာရှိပုစှနျငါးဖမျးပိုကျလှေ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးကို ဦးဆှသေနျးဆိုသူက ပိုငျဆိုငျထားပွီး ရှာသား ( ၉၀ ) ရာခိုငျနှုနျးသညျလညျး ၎င်းငျး ထံတှငျ အလုပျလုပျနကွေရသညျ။
အလုပျသမားတဈဦး၏ တဈလ လုပျအားခမှာ က‌လေးဆိုလြှငျ ကပျြသုံးသောငျးဝနျးကငျြနှငျ့ လူကွီးဆိုရငျကပျြတဈသိနျးဝနျးကငျြခနျ့ ရရှိကွသညျ၊သို့သျောရရှိသညျ့ လုပျအားခကိုမူငှကွေေးအဖွဈ သူဌေးကမညျ့သညျ့အခါကမှ ထုတျပေးခွငျးမရှိ။
ငှရှေိပါကလညျး ဝယျခွမျးစားသောကျစရာ ဈေးဆိုငျ လကျဖကျရညျဆိုငျ အရကျဆိုငျ ကှမျးယာဆိုငျ ဟူ၍လညျးရှာတှငျ မရှိ ။ဆိုငျဆိုသညျက နတ်ထိ ။ရှာသားမြားလိုအပျသညျ့ ပစ်စညျး မြား အားလုံးကိုဦးဆှသေနျး ဆိုငျတဈခုတညျးတှငျသာ ရယူကွရသညျ။
ဆိုငျဆိုတာ သူတို့မထိုငျဖူးကွသူကမြားတယျ။တခွားရှာရောကျလို့လညျး ဆိုငျထိုငျဖို့ သူတို့မှာ ပိုကျဆံမှမရှိတာဟု ၄၅ နှဈရှိ ယငျးရှာသားတဈဦးက ပွောသညျ။ရှာတှငျ အလယျတနျးအဆငျ့ထိစာသငျ ကြောငျးရှိသျောလညျး လူငယျသုံးပုံတဈပုံမှာ ကြောငျးမနကွေရ။
စောစောစီးစီးလုပျငနျးခှငျထဲ ဝငျရောကျလုပျကိုငျနကွေရသညျ။ ဦးဆှသေနျးထံတှငျ ရှာ၏လူဦးရေ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့အလုပျလုပျနကွေရာတှငျအသကျ ၁၈ နှဈအောကျ ရလေုပျသား ငါးဆယျကြျောခနျ့လညျးဝငျရောကျလုပျကိုငျနကွေသညျဟု ရှာသားကပွောပွကွသညျ။
သူဌေးနားမှာ အလုပျလုပျနသေူတှကေ တဈယောကျမှအကွှေးမကငျးကွဘူး ။ အနိမျ့ ဆုံးဆယျသိနျးလောကျတော့အကွှေးတငျနကွေတယျ ဟု ယငျးရှာနထေိုငျသူ အသကျ ၃၅ နှဈရှိ အမညျမဖျောလို အမြိုးသမီးတဈဦးက ပွောသညျ။
အကွှေးတငျနသေူမြားကို သူဌေးက ရသညျ့လစာထဲမှ လစဉျနုတျယူလကျြရှိပွီး ယငျးလူမြားအား ရိက်ခာ ပစ်စညျး ရောငျးခရြာတှငျလညျးတဈနေ့ နှဈထောငျငါးရာ တနျဖိုးထကျ ပိုရောငျးပေးခွငျးမရှိဟု ၎င်းငျးတို့ကဆိုသညျ။
ယငျးအပွငျကနျြးမာရေးမကောငျးသဖွငျ့ အလုပျမဆငျးနိုငျလြှငျလညျး ယငျးမိသားစုအား အလားတူ တဈနေ့ နှဈထောငျထကျ ပိုရောငျးပေးလမေ့ရှိ ဟုရှာသားမြားကပွောပွသညျ။လူမြားတဲ့ မိသားစုက ဘယျလိုလုပျပွီး စားလောကျမလဲ။
ဆနျတဈပွညျပဲ တဈထောငျကြျောကနြပွေီဟု ရှာနအေမြိုးသမီးတဈဦးကပွောသညျ။အိမျထောငျဦးစီးတဈဦးသလြှေငျ ကနျြရဈမိသားစုက အကွှေးကအြေောငျလုပျဆပျနရေပွီး သူဌေးအကွှေးသံသရာဝဲသွဃအတှငျး သူတို့ဘဝမြား ရုနျးထှကျလှတျမွောကျနိုငျစှမျးမရှိကွပေ။
အထကျပါအကွောငျးရာမြားကို The Tanintharyi Weekly တနင်ျသာရီ နိုဝငျဘာ၁၆ နိုဝငျဘာ ၂၂ ၊ ၂၀၂၀၊ တနင်ျလာနထေု့တျ ဂြာနယျမှာ အကဉျြးခြုပျဖျောပွခဲ့ပါသညျ။
ထိုနညျးအတူ မွိတျခရိုငျ ကြှနျးစုမွို့နယျအတှငျး ကြားပါးစပျ တံငါလုပျသား မြားဟာလညျး မိသားစုလိုကျ အကွှေးနှံနှဈ၍ ကြားပါးစပျလုပျသားတိုငျးလိုလို သားသမီးမြားကိုပငျကြောငျမထားနိုငျ တဈခြို့ကြှနျး မြားမှာလညျးကြောငျးမြားမရှိကွ၍….
တဈခြို့သောကြားပါးစပျရှိရာ ကြှနျးမြားဟာလညျး ကြားပါးစပျ သူဌေးစကျလှကေလှဲ၍ မညျသညျ့လှတေဈစီးမှာလာရောကျခွငျး မရှိကွပါကွောငျး ထပျလောငျး၍ပွောပွလိုကျပါရစေ။